Wararka - Ilaalinta deegaanka iyo joogtaynta-isbeddelka dharka dabiiciga ah xilliga guga iyo xagaaga ee 2022
In kasta oo cudurka faafa ee taajku uu sababay xoogaa qalalaase bulsheed, fikradda ilaalinta deegaanka ayaa weli ah diiradda macaamiisha iyo noocyada. Fahamka dadku ka qabo sida deegaanka dhulku u saameeyo caafimaadka aadanaha ayaa sii qoto dheer, ilaalinta deegaanka ayaa horeyba u ahayd qodob muhiim ah oo ay tixgeliyaan dadweynuhu. Loogu talagalay warshadaha dharka, sida loo soo bandhigo xalal waara oo ka yimaada fiberka ilaa moodada, isticmaal fiilooyinka dabiiciga ah si loo yareeyo saameynta deegaanka, iyo in la ogaado silsilad alaab dib-u-warshadaynta oo si buuxda loo adeegsado iyadoo loo marayo teknolojiyada dijitaalka ah. Waxay noqon doontaa isbeddelka ugu weyn ee horumarka ee dharka dharka mustaqbalka. Sidaa darteed, mawduucani wuxuu diiradda saari doonaa fiber-ka cudbiga dabiiciga ah, cudbiga midabka dabiiciga ah, beeraha dabiiciga ah ee dib loo cusbooneysiin karo, dheehidda dhirta, farsamada gacanta oo gaabis ah, dib u warshadeynta iyo fikradaha kale ee ilaalinta deegaanka si loo abuuro nolol cagaaran oo qurux badan Waxay sidoo kale noqon doontaa horumarka ugu muhiimsan ee warshadaha dharka dharka sanadaha soo socda. Dalbo wadayaasha.
Fiber cudbi dabiici ah
Fikradda ugu muhiimsan: Cudbiga dabiiciga ah waa nooc ka mid ah suufka dabiiciga ah iyo wasakhda aan wasakhda lahayn. Wax soo saarka beeraha, bacriminta dabiiciga ah, xakameynta bayoolojiga ee cayayaanka iyo cudurada, iyo maaraynta beeraha dabiiciga ah ayaa badanaa la isticmaalaa. Waxyaabaha kiimikada ah lama ogola, wasakhda-xorna waxaa looga baahan yahay habka wax soo saarka iyo wareejinta. ; Waxay leedahay astaamaha bey'ada, cagaaran iyo ilaalinta deegaanka. Daraasad la sameeyay ayaa muujineysa in dhirtada dabiiciga ah ay kalabar dhigeyso saameynta cudbiga ay ku leedahay deegaanka, sidaasna ay gacan uga geysaneyso hagaajinta kala duwanaanshaha noolaha iyo caafimaadka carrada, iyo yareynta kiimikada sunta ah Noocyo ay ka mid yihiin H&M iyo Uniqlo ayaa maalgashaday qorshooyin cudbi dabiici ah si ay u daboolaan baahida macaamiisha “Hindisaha lagu hagaajinayo cudbiga.” Sidaa darteed, fiilooyinka cudbiga ee dabiiciga ah ayaa ku biiray iskaashiga dharka ee waara.
Geedi socodka & Fibreerka: Fiber cudbi dabiici ah ayaa loogu koray hab dabiici ah. Saldhigga dabiiciga waa inuu kuyaala aag jawiga, biyaha iyo carrada aan wasakheyn. Dharka laga tolay suufka dabiiciga ah ayaa leh dhalaal dhalaalaya, dareen gacan jilicsan iyo adkeysi wanaagsan; waxay leedahay astaamo u gaar ah bakteeriyada iyo caraf udgoon; waxay yareysaa astaamaha xasaasiyadda waxayna u sahlaysaa daryeelka maqaarka. Waxaa loo isticmaalaa xilliga kuleylaha waxayna dadka ka dhigtaa mid si gaar ah u deggan oo deggan.
Soojeedinta dalabka: Fibrada cudbiga ee dabiici ah waxay ku haboontahay dharka dabiiciga sida suufka, linenka, xariirka, iwm., Waxaana lagu dabaqi karaa baahiyaha muuqaalka ee kaladuwan. Lagu dabaqi karo horumarinta dhammaan noocyada alaabada dharka shakhsiyeed ee raaxada leh.
Suuf midab dabiici ah
Fikradda muhiimka ah: Muddo dheer, dadku waxay ogaayeen oo keliya in suufku caddaan yahay. Xaqiiqdii, suuf midab leh ayaa horeyba ugu jiray dabeecadda. Midabka suufkani waa dabeecad cilmiyan bayooloji ah, oo ay xukumaan hiddo-wadayaal hidde ah oo loo gudbin karo jiilka dambe. Cudbiga midabka dabiiciga ahi waa nooc cusub oo ka mid ah waxyaabaha dharka lagu sameeyo oo adeegsada tikniyoolajiyad casri ah oo lagu beero nooc cusub oo dhar ah oo leh midabbo dabiici ah markii cudbigu soo tufay. Waxyaalaha suufka midabaysan ayaa waxtar u leh caafimaadka aadanaha; hoos u dhigida daabacaadda iyo dheehida geeddi-socodka dharka ayaa u hoggaansamaya hal-ku-dhigga ah "kacaanka cagaaran" ee ay bini-aadamku hore u soo jeediyeen, wuxuu yareynayaa wasakheynta deegaanka, wuxuu ka caawinayaa waddanku inuu sii wado joogteynta maqaamkiisa ah inuu yahay dhoofiyaha ugu weyn ee dharka, uuna jebiyo "caalamiga ah ganacsiga cagaaran" ”. Caqabadaha ”.
Geedi socodka & Fibreerka: Marka la barbardhigo cudbiga caadiga ah, waa mid u adkaysta abaarta, u adkaysata cayayaanka, isticmaalka biyaha iyo soo-saarka beeralayda oo hooseysa. Fiilooyinka suufka midabka dabiiciga ahi way ka gaaban yihiin kana jilicsan yihiin qolofta kale ee dabiiciga ah. Noocyada midabku aad ayey u kooban yihiin, qaarkood way yar yihiin, waxsoosaarkuna wuu hooseeyaa. Cudbiga midabka dabiiciga ahi waa mid aan wasakh lahayn, tamar-kaydiya oo aan sun lahayn. Midabka suufku wuxuu soo bandhigayaa midab dabiici ah oo casaan ah, casaan, cagaar iyo bunni ah. Ma libdho oo waxay leedahay iska caabbin cadceedda.
Talo soo jeedin dalab: Fiber dabiici ah oo midab dabiici ah leh, kuna habboon horumarka maqaarka u fiican, deegaanka u roon, waxyaabaha dharka aan dyeynin. Calaamadda Harvest & Mill, qaabka aasaasiga ah ee cudbiga midabka dabiiciga ah ayaa koray, la safeeyey oo la tolay Maraykanka, walxaha xaddidan ee cudbiga ahna way gabaabsi yihiin.
Beeraha dabiiciga ah ee dib loo cusboonaysiin karo
Fikradda Muhiimka ah: Beeraha dabiiciga ah badanaa waxay loola jeedaa beerista miraha iyo khudaarta iyada oo aan laga qeybgalin kiimikooyin, iyadoo maareynta sayniska ay tahay heerka iyo cagaar dabiici ah oo fikradeed. Ficilkani wuxuu soo celin karaa carrada, wuxuu ilaalin karaa xayawaanka, wuxuu hagaajin karaa biyaha wuxuuna kordhin karaa kala duwanaanshaha. Wax soo saarka beeraha ee dabiici aha waa badeecado caalami ah oo tayo sare leh, oo aan wasakheyn wasakhda deegaankana u roon. Sidaa darteed, beeraha dabiiciga ah waxaa loo sameeyay si loo wanaajiyo tartanka wax soo saarka dalaga beeraha ee wadankeyga ee suuqa caalamiga ah, kor u qaadista shaqada miyiga, dakhliga beeraleyda, iyo horumarinta wax soo saarka beeraha.
Farshaxanada & Fiberrada: Patagonia, oo horseed u ah beeraha dib loo cusboonaysiin karo, iyada oo loo marayo barnaamijkeeda ROC, waxay fulisaa faybar dabiici ah oo iswaafajin kara iyo raashin aruurinta, waxayna lashaqeysaa in kabadan 150 beerood oo ku yaal Hindiya si ay u siiso dharka fiber-ka dabiiciga ah ee dharka. In la sameeyo nidaam dhar cusboonaysiin ah oo ku saleysan maareynta dhulka.
Soo jeedinta dalabka: Oshadi wuxuu hirgaliyaa qorshaha “Laga soo bilaabo Abuurka ilaa Taranka”, oo ujeedkiisu yahay in dib loo dhiso si loo wanaajiyo beerashada cudbiga iyo dhirta dheeha dabiiciga ah. Qeybtii ugu horreysay ee dharka iskaashiga waxaa laga heli doonaa khadka tooska ah iyo khad la'aanta goor dhow. Ururinta Xididdada leh ee loo yaqaan 'Wrangler brand' waa taxanaha ugu horreeya ee miyiga ku xidha sheyga. Jiinisyo iyo funaanado ayaa lagu calaamadeeyay magaca beerta cudbiga.
Fikradda Muhiimka ah: Midabaynta dhirta waxaa loola jeedaa hab loo adeegsado dhir kala duwan oo ay ku jiraan midabyo si dabiici ah ugu baxa dabiicadda si looga soo saaro midabbo si loo dheehdo walxaha midabbada leh. Ilaha ugu muhiimsan ee midabada dhirta waa cows, madder, rose, nettle, eucalyptus, iyo ubaxyo jaalle ah.
Geeddi-socodka & Fibreerka: Midabbada midabbada dhirta waxaa badanaa laga helaa dhirta waxaana lagu sifeeyaa habab farsamo, waana walxo midab leh oo adkeysi leh oo aan sii dhammaanayn. Isticmaalka dheehida dhirta kaliya ma yareyn karto waxyeelada ay dheehu u leeyihiin jirka bini'aadamka waxayna si buuxda u isticmaali karaan kheyraadka dabiiciga ah ee dib loo cusboonaysiin karo, laakiin sidoo kale waxay si weyn u yareynaysaa sumowga dheeha biyaha wasakhda ah, taas oo ku haboon yareynta culeyska daaweynta bullaacadaha iyo ilaalinta deegaanka. .
Soo jeedinta arjiga: dheehidda dhirta waxay leedahay xiriir wanaagsan oo loogu talagalay fiilooyinka dabiiciga ah. Midabka muuqaalka ayaa ku dhameystiran xariirta, midabku waa dhalaalayaa, soonkuna waa wanaagsan yahay. Marka labaad, suufka suufka, fiberka dhogorta ah, fiber bamboo iyo modal ayaa aad ugu habboon; sidoo kale waxay waxtar u leedahay qaar ka mid ah fiilooyinka dib loo warshadeeyay. Waxay ku habboon tahay dhar-u-diyaar-garowga iyo dhallaanka iyo sahaydiisa, nigisyada, dharka guriga, dharka isboortiga, alaabada dharka ee guriga, iwm.
Gacan gaabis ah
Fikradda Muhiimka ah: Hubaal la'aanta xaaladda dhaqaale ee caalamiga ah, suuqa iibka gacanta labaad iyo farshaxanka DIY ayaa kor u kacaya, iyo adeegsiga fikradda qashinka eber ee muujineysa ruuxa xorriyadda ayaa dhalatay, iyadoo laga dhawaajinayo mawduuca farsamada gacanta iyo qaab gaabis ah. Si qoto dheer ayay u raadinayeen macaamiisha.
Farshaxanada & Fibradaha: Adoo isticmaalaya dharka jira, walxaha iyo agabka bey'ada u fiican si ay u ciyaaraan dhiirigelin cusub, tolmo, tolmo, tolid iyo farsamo-yaqaanno kale ayaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaab cusub oo gacmo-tolmo leh oo gadaal loo riixo.
Soo jeedinta dalabka: Alaabtu waxay ku habboon tahay samaynta agab gacmeed, boorsooyin, dhar iyo alaab guri.
Fikrad Muhiim ah: Sida lagu sheegay sahanno, 73% dharka adduunka ayaa ku dambeeya qashin-qubka, in ka yar 15% dib ayaa loo warshadeeyaa halka 1% loo isticmaalo dharka cusub. Waqtigan xaadirka ah, cudbiga badankiisa waxaa dib loo warshadeeya mishiino, lagu kala saaraa midabkiisa, laguna googooyaa fibreerka dhaldhalaalka ah laguna mideeyaa dun cusub. Waxa kale oo jira qayb yar oo ka mid ah habka kiimikada loo beddelayo cudbiga si looga caawiyo inay xaqiijiso meertada. Tani waxay yareyn kartaa saameynta deegaanka ee suufka bikradda ah, yareynta xaalufka, qashinka biyaha iyo soosaarka kaarboon dioxide.
Geeddi-socodka & Fibreerka: Nidaamka dib-u-cusbooneysiinta iyo dib-u-warshadaynta dharka dib loo warshadeeyay ayaa dib-u-warshadayn kara qaddar badan oo ah qashinka warshadaha ee ka imanaya noocyada caalamiga ah iyo tafaariiqleyda, iyada oo loo marayo kala soocidda buugga iyo leysarka, loona beddelo shay dun yar oo u hoggaansamaya.
Soo jeedinta arjiga: Dib-u-warshadayntu waxay leedahay awood ay ku ballaariso muddada-gaaban, iyo hal-abuurka calaamadaha dharka ayaa taageeraya raadinta iyo dib-u-warshadaynta. Badeecaddu waxay ku habboon tahay tolmo, funaanad, denim iyo qaabab kale.